पुटिनलाई ‘भ्यागुता’ भन्दै विपक्षी नेताले गरे आन्दोलनको अपिल | पुटिनलाई ‘भ्यागुता’ भन्दै विपक्षी नेताले गरे आन्दोलनको अपिल – हिपमत
विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्दै
पुटिनलाई ‘भ्यागुता’ भन्दै विपक्षी नेताले गरे आन्दोलनको अपिल
रुसी विपक्षी नेता एलेक्जाई नाभाल्नीले सोमबार जनतालाई आन्दोलनमा उत्रन अपिल गरेका छन् । युट्युबमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै नाभेल्नीले आन्दोलनको अपिल गरेका हुन् । ‘यी भ्यागुता (भ्लादिमिर पुटिन) सबैभन्दा धेरै केसँग डराइरहेका छन् ? यी बंकर चोरहरु केसँग धेरै डराइरहेका छन् ? तपाईहरुलाई राम्ररी थाहा छ, उनीहरु मानिस सडकमा आउँछन् कि भनेर तर्सिरहेका छन् । त्यसैकारण तपाईंहरु सडकमा आउन तर्सनुहुन्न । मेरा लागि होइन, तपाईं र तपाईंको भविष्यका लागि,’ उनले भने ।
नाभाल्नीलाई ३० दिनसम्म थुनामा राख्ने आदेश आएपछि उनले यस्तो अपिल गरेका हुन् । आइतबार पक्राउ परेयता उनी मस्को पुलिसको हिरासतमा छन् र उनको विषयमा एक घण्टासम्म अदालती सुनुवाई चलेको थियो । अदालती सुनुवाईअघि उनलाई वकिलहरुसँग सम्पर्क राख्न नदिइएको उनको कानूनी टिमको आरोप छ ।
अमेरिका र युरोपेली युनियनले नाभाल्नीको रिहाईको माग गरेका छन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले नाभेल्नी पक्राउ परेको समाचार सुनेपछि आफुलाई गहिरो दुख लागेको बताएका छन् । ‘आत्मविश्वास भएका नेताहरु राजनीतिक विपक्षीसँग तर्सनुहुन्न, न त उनीहरुले हिंसा वा गलत रुपमा विपक्षीलाई हिरासतमा राख्ने काम नै गर्छन्,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
ट्वीटरमार्फत युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष चाल्र्स मिचेलले पनि नाभाल्नीको तत्काल रिहाईको माग गरेका छन् । थुनामा राख्ने काम अस्विकार्य हुने उनले बताएका छन् ।
किन पक्राउ गरियो ?
रुसी अधिकारीहरुले पक्राउ गर्ने धम्की दिएपनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नाभेल्नी घर फर्किएका थिए । भनुकोभो विमानस्थलमा नाभेल्नीका दर्जनौं समर्थक र पत्रकारसँगै दंगा प्रहरी पनि उनलाई कुरेर बसेको थियो ।
तर, पूर्व निर्धारित गन्तव्य परिवर्तन गर्दएै बर्लिनबाट मस्कोस्थित सेरेमेतयेभो विमानस्थलमा उनको जहाज अवतरण गरेको थियो । युरो न्युजकी संवाददाता गालिना पोलोन्सकाया पनि उनीसँग विमानमा थिइन् । हवाई यात्राका क्रममा नाभेल्नीले रिपोर्टरहरुसँग जोक गरिरहेको उनले बताइन् । उनले विमानमा अन्तर्वार्ता दिन भने अस्विकार गरेका थिए । तपाईंलाई पक्राउ पर्छु भन्ने डर त छैन भनेर एक व्यक्तिले सोधेपछि उनले जवाफ फर्काएका थिए, ‘म किन पक्राउ पर्ने ?’
पाइलटहरुले पहिले ३० मिनेट विमान अवतरणमा ढिलाई हुने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि प्राविधिक कारणवस् भनुकोभो विमानस्थल नभएर सेरेमेतयेभो विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्ने जानकारी गराए । त्यसपछि नाभाल्नीले यस्तो हुने अपेक्षा आफूले नगरेको बताएका थिए । ‘यसले देखाउँछ कि उनीहरु मसँग कुन हदसम्म तर्सिएका छन् ?’ उनले भनेका थिए ।
नर्भ एजेन्ट (विषाक्त केमिकल) को प्रयोगपछि झन्डै मृत्युको मुखमा पुगेका नाभेल्नी जर्मनीमा उपचार गराएर घर फर्किएका हुन् । फेरि जेल हाल्नसक्ने रुसी अधिकारहिरुको चेतावनीका बाबजुद गत बुधबार उनले आफू घर फर्कने घोषणा गरेका थिए । गत अगस्टमा रुस सरकारले नै आफूमाथि विष प्रयोग गरेको उनको आरोप छ । यद्यपी, रुसले विपक्षी नेताको विष प्रकरणमा सरकारको संलग्नता नरहेको बारम्बार जनाउँदै आएको छ ।
डिसेम्बरको अन्त्यमा रुसी संघीय पेनिटेन्सियरी सर्भिस (एफएसआईएन) ले आफ्नो कार्यालयमा तत्कालै रिपोर्ट नगरे नाभाल्नीमाथि जेल सजाय हुनसक्ने धम्की दिएको थियो । सन् २०१४ मा नाभाल्नीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा पाएको निलम्बित सजायकै नियमित प्रक्रिया अनुरुप बयान दिनुपर्ने यस संस्थाले जनाएको थियो । यद्यपी, यस कदमलाई नाभेल्नीले राजनीतिक रुपमा प्रेरित आरोप भनेका छन् ।
युरोपियन कोर्ट फर ह्युमन राईटस्ले पनि यो आरोपलाई गैरकानूनी भनेको थियो । एफएसआईएनले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो कार्यालयमा नाभाल्नीले रिपोर्ट नगरेपछि उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जनाएको छ । नाभाल्नीको ३ वर्ष ५ महिनाको निलम्बित सजायलाई कार्यान्वयन गर्न मस्को अदालतसँग एफएसआईएनले माग गरेको छ ।
२० अगस्ट २०२० मा साइबेरियाबाट मस्को जाँदै गर्दा एकाएक हवाईजहाजमै बिरामी भएका ४४ वर्षीय नाभाल्नी कोमामा पुगेका थिए । उनलाई पहिले साइबेरिया र त्यसपछि जर्मनीको बर्लिनस्थित अस्पताल लगिएको थियो । जर्मनी, फ्रान्स र स्विडेनका ल्याब तथा अर्गनाइजेशन अफ द प्रोहिविशन अफ केमिकल विपन्सले गरेको परीक्षणबाट नाभाल्नीमा सोभियतकालिन नोभिचोक नर्भ एजेन्ट प्रयोग भएको देखिएको थियो ।
मंगलबार, माघ ०६, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
फेसबुकमा नयाँ विशेषता थप्ने तयारी
छोराले कोक पिउँदा हैरान हुन्थे रोनाल्डो
उत्तर कोरियामा भोकमरी लाग्दैछ, किम जोङ चिन्तित
रोनाल्डोले कोकका दुईवटा बोतल हटाएर पानीकाे बाेतल उठाए,कोकलाई चार अर्ब डलर घाटा
जेनेभामा बाइडेन–पुटिन भेट्दै
रामायणमा राजा दशरथको महामन्त्री ‘आर्य सुमन्त’ को निधन
एक वर्ष भित्र १२० रुपियाँले महँगियो खानेतेल
एमाले विवाद सहमति नजिक
आज यी स्थानहरुमा वर्षा,पहिरो उच्च सम्भावना